ခုလို မတရားအမိနျ့တှကေို ဘယျလိုတရားသူကွီးမြိုးကမြား ခမြှတျသလဲဆိုပွီး မေးခှနျးထုတျလာတဲ့ ဥက်ကာမငျးမောငျ – Shwe Likes
Shwe | December 31, 2021 | Celebrity | No Comments
မငျးသားတ ဈယောကျ လညျးဖွ ဈသလို အလှမောငျတ ဈယော ကျလညျးဖွ ဈတဲ့ ဥက်ကာမငျးေ မာငျကေ တာ့ လကျရှိမှာ အမရေိက နျနိုငျငံ New York မွို့မှာ နထေိုငျနသေူ တဈယော ကျဖွဈပွီး အနုပ ညာအလု ပျတှနေဲ့ အလှမျးဝေးသှားခဲ့ေ ပမယျ့ ပရိသတျေ တှရဲ့ အားေ ပးမှုကို ရရှိနေ ဆဲဖွဈပါတ ယျ။
ဥက်ကာမငျးေ မာငျက သူကိုယျတို ငျလညျး ပွညျပရောကျ မွနျမာ လူမြိုးတှနေဲ့ အတူတူ မွနျမာပွ ညျကွီးအတှကျ ငွိမျးခမျြးစှာ ဆန်ဒထုတျဖျောေ ပးခဲ့ပွီး မွနျမာပွညျကသ တငျးတှကေို အမွဲတမျး နားစှငျ့ေ နသူတဈယောကျွ ဖဈပါတယျ။ ဒီတဈခါမှာလညျး ဥက်ကာမငျးေ မာငျက အနုပညာရှငျေ တှကို မတရား အမိနျ့တှခြေ မှတျပွီး ထောငျဒ ဏျခမြှတျခဲ့တာနဲ့ ပကျသတျပွီး အခုလိုပွဲေ ပာလာပါတယျ။
“ကိုလူမငျး၊ကို ရဲတိုကျ၊ကို ပွတေီဦး၊ မအူဝဲ၊ မဝငျးမငျးသနျး၊ ညီေ လး ပိုငျတံခှနျ တို့ အမွနျဆုံး ပွနျလညျလှ တျမွောကျလာပါစေ။ ရငျထဲမကော ငျးဘူး။ ဘယျလို တရားသူ ကွီးမြိုးက ဒီလိုအမိနျ့ကိုခသြလဲ? အလုပျကွမျး ကပါသေးတယျ။
ဒေါသတှေ ထှကျလိုကျတာ Human rights ဆို တာမရှိ၊ မတရားမှူနဲ့ အဓမ်မ ကွီးစိုးတဲ့ နိုငျငံ၊ လူစိတျမရှိ မိသားစုခငျြး သား သမီးခငျြး စာနာ စိတျမရှိ ကိုယျ့တဘို့ထဲလောဘ ကိုယျ့ဆှေ တစုမြိုးတစုကောငျးဖို့ပဲ ကွညျ့တတျတဲ့ စဈအာဏာရူး တသိုကျကွောငျ့ အပွဈမ ရှိတဲ့ လူသားတှေ အသ ကျဆုံးရှုံးရတယျ။ ဘဝတှေ နဈနာရတယျ။ မိသားစုတှပွေိုကှဲရတယျ”
” ပွညျသူတှေ စီး ပှားရေးတှေ ခြှတျခွုံကရြတယျ။ အကွောကျတ ရားတှနေဲ့ ဘဝကိုရှဆေ့ကျနရေတယျ။ ပွညျသူ့ကြိနျစာ တှစေူးပါစေ။ ဝဋျကွီး ဝဋျငယျ မသခေငျပွနျလညျခံစားကွရပါစေ.. အမစေု၊သ မ်မတကွီး နှငျ့တကှ အခြုပျအနှောငျခံနရေတဲ့ အပွဈမဲ့ ပွညျသူမြား အားလုံး အမွနျဆုံးလှ တျမွောကျပါစေ.. ဘေးကငျးပါစေ… ကနျြးမာပါစေ.” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ဖစျေ့ ဘုတျစာမကျြနှာမှာ ပွောလာပါတယျ။
ဥက်ကာမငျးမော ငျကတော့ ပွညျသူတှေ အားလုံးကို စိတျထော ငျးကိုယျွေ ကဖွဈရေ အာငျ အမြိုးမြိုးဒုက်ခပေးနကွေတဲ့ စဈအာဏာရှငျရူး တသိုကျကို ပွညျသူ့ကြိ နျစာ တှစေူးပါစေ ဆိုပွီးပွောလာတာ ပဲဖွဈပါတယျ။ Source: Ye Htoo Win ‘s fb
မင်းသားတ စ်ယောက် လည်းဖြ စ်သလို အလှမောင်တ စ်ယော က်လည်းဖြ စ်တဲ့ ဥက္ကာမင်းေ မာင်ကေ တာ့ လက်ရှိမှာ အမေရိက န်နိုင်ငံ New York မြို့မှာ နေထိုင်နေသူ တစ်ယော က်ဖြစ်ပြီး အနုပ ညာအလု ပ်တွေနဲ့ အလှမ်းဝေးသွားခဲ့ေ ပမယ့် ပရိသတ်ေ တွရဲ့ အားေ ပးမှုကို ရရှိနေ ဆဲဖြစ်ပါတ ယ်။
ဥက္ကာမင်းေ မာင်က သူကိုယ်တို င်လည်း ပြည်ပရောက် မြန်မာ လူမျိုးတွေနဲ့ အတူတူ မြန်မာပြ ည်ကြီးအတွက် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ေ ပးခဲ့ပြီး မြန်မာပြည်ကသ တင်းတွေကို အမြဲတမ်း နားစွင့်ေ နသူတစ်ယောက်ြ ဖစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာလည်း ဥက္ကာမင်းေ မာင်က အနုပညာရှင်ေ တွကို မတရား အမိန့်တွေချ မှတ်ပြီး ထောင်ဒ ဏ်ချမှတ်ခဲ့တာနဲ့ ပက်သတ်ပြီး အခုလိုပြဲေ ပာလာပါတယ်။
“ကိုလူမင်း၊ကို ရဲတိုက်၊ကို ပြေတီဦး၊ မအူဝဲ၊ မဝင်းမင်းသန်း၊ ညီေ လး ပိုင်တံခွန် တို့ အမြန်ဆုံး ပြန်လည်လွ တ်မြောက်လာပါစေ။ ရင်ထဲမကော င်းဘူး။ ဘယ်လို တရားသူ ကြီးမျိုးက ဒီလိုအမိန့်ကိုချသလဲ? အလုပ်ကြမ်း ကပါသေးတယ်။
ဒေါသတွေ ထွက်လိုက်တာ Human rights ဆို တာမရှိ၊ မတရားမှူနဲ့ အဓမ္မ ကြီးစိုးတဲ့ နိုင်ငံ၊ လူစိတ်မရှိ မိသားစုချင်း သား သမီးချင်း စာနာ စိတ်မရှိ ကိုယ့်တဘို့ထဲလောဘ ကိုယ့်ဆွေ တစုမျိုးတစုကောင်းဖို့ပဲ ကြည့်တတ်တဲ့ စစ်အာဏာရူး တသိုက်ကြောင့် အပြစ်မ ရှိတဲ့ လူသားတွေ အသ က်ဆုံးရှုံးရတယ်။ ဘဝတွေ နစ်နာရတယ်။ မိသားစုတွေပြိုကွဲရတယ်”
” ပြည်သူတွေ စီး ပွားရေးတွေ ချွတ်ခြုံကျရတယ်။ အကြောက်တ ရားတွေနဲ့ ဘဝကိုရှေ့ဆက်နေရတယ်။ ပြည်သူ့ကျိန်စာ တွေစူးပါစေ။ ဝဋ်ကြီး ဝဋ်ငယ် မသေခင်ပြန်လည်ခံစားကြရပါစေ.. အမေစု၊သ မ္မတကြီး နှင့်တကွ အချုပ်အနှောင်ခံနေရတဲ့ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူများ အားလုံး အမြန်ဆုံးလွ တ်မြောက်ပါစေ.. ဘေးကင်းပါစေ… ကျန်းမာပါစေ.” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ဖေ့စ် ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ပြောလာပါတယ်။
ဥက္ကာမင်းမော င်ကတော့ ပြည်သူတွေ အားလုံးကို စိတ်ထော င်းကိုယ်ြေ ကဖြစ်ရေ အာင် အမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးနေကြတဲ့ စစ်အာဏာရှင်ရူး တသိုက်ကို ပြည်သူ့ကျိ န်စာ တွေစူးပါစေ ဆိုပြီးပြောလာတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Source: Ye Htoo Win ‘s fb
အမရေိကနျနိုငျငံ နယူးယောကျမွို့ကို နိုငျငံရေး ခိုလှုံခှငျ့နဲ့ ရောကျရှိသှားခဲ့ပွီဆိုတဲ့ မဦေးနဲ့ ဟနျလငျး